GF-B03FR Ezochiri ọnụ ụzọ ọkụ dara akara akara, ụdị mmiri M, dabara maka ọnụ ụzọ nwere oghere na ọnụ ụzọ ụzọ. N'oge echichi, enwere 34mm * 14mm site na oghere na ala ọnụ ụzọ. Debe ngwaahịa n'ime ya, dozie ya na nku nke ngwaahịa ahụ, ma wụnye mkpuchi njedebe mara mma na kposara. Ojiji nke ngwaahịa a emetụtaghị ụzọ ọnụ ụzọ. Mgbe ọkụ gbara, akàrà mmụba ọkụ a na nku ya arụnyere n'akụkụ abụọ ga-agbasa ngwa ngwa ...
Idebe ala akara maka iko n'ọnụ ụzọ GF-B15
GF-B15 Mpụga-n'ịnyịnya ala akara na-adabara post-mmezi oru. Ọ bụrụ na etinyere ọnụ ụzọ ahụ, ọ kwesịrị ịgbakwunye mkpuchi ụda, mkpuchi okpomọkụ, igbochi ájá na ọrụ ndị ọzọ. Ọ dị mfe ma dị mfe iji wụnye n'elu ala ụzọ; ọdịdị ahụ mara mma. • Ogologo ： 380mm-1500mm • Oghere akara ： 3mm-15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha • Idozi ：Repụ ihe mkpuchi aluminom alloy, wụnye ya na kposara, wee kpuchie ya ...
GF-B11 Ihe nkedo a na-emechi emechi nke e mepụtara maka ọnụ ụzọ. Mgbe ọnụ ụzọ na-amị amị iji mechie, eriri akara ahụ na-agbadata na-akpaghị aka iji mechie oghere dị na ala nke ọnụ ụzọ ahụ. Emechiri steeti emechi site na ndọta ike. Mgbe ejiri ọnụ ụzọ na-emegharị ọnụ jiri aka ya rụọ, eriri akara ahụ na-akpaghị aka. Enweghị esemokwu n'etiti eriri roba na ala. • Ogologo ： 300mm ~ 1500mm ， • Akara ọdịiche ： 3mm ~ 15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha • Idozi ： oghere 18mm * 35mm thr ...
Ọkụ akpọrọ dobe akara GF-B09
Nwalere site na European BS EN-1634 maka oge 1/2 GF-B09 Zoro ezo dochie akara ala, usoro njikọ mmanya anọ, dabara maka ọnụ ụzọ nwere oghere na ọnụ ụzọ. N'oge echichi, enwere 34mm * 14mm site na oghere na ala ọnụ ụzọ. Debe ngwaahịa n'ime ya, ma dozie ihe mkpuchi na ihe mkpuchi ahụ na nsọtụ abụọ ya na kposara (ma ọ bụ jiri kposara iji dozie na ala nke akara akara ahụ). Ojiji nke ngwaahịa a emetụtaghị ụzọ ụzọ niile. • Ogologo ： 380mm-1800mm • akara ọdịiche ...
Zoro ezo dobe ala akara GF-B092
GF-B092 Zoro ezo dochie akara ala, usoro njikọ mmanya anọ, dabara maka ọnụ ụzọ nwere oghere na ọnụ ụzọ ụzọ. N'oge echichi, enwere 34mm * 14mm site na oghere na ala ọnụ ụzọ. Debe ngwaahịa n'ime ya, ma dozie ihe mkpuchi na ihe mkpuchi ahụ na nsọtụ abụọ ya na kposara (ma ọ bụ jiri kposara iji dozie na ala nke akara akara ahụ). Ojiji nke ngwaahịa a emetụtaghị ụzọ ụzọ niile. • Ogologo ： 330mm-1800mm • Oghere akara ： 3mm-15mm • Emecha silver Anodized ọlaọcha • Idozi ： Na unyi ...